ဘဝမှတ်တိုင်: နောက်ခံ Backgroundလေးကို 3D Parallax Background V 1.20 APKလုပ်ကြမယ် for android(latest version)
နောက်ခံ Backgroundလေးကို 3D Parallax Background V 1.20 APKလုပ်ကြမယ် for android(latest version)
Live Wallpaper တွေကိုနှစ်သက်သော Android ဖုန်း ပိုင်၇ှင်ဘော်ဒါတို.အတွက်…..3D Parallax Background V-1.20For Android နောက်ဆုံးဘားရှင်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်3D Parallax Background ဆိုတဲ့ Apk လေးကတော့ … အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ … Android OS
ကိုင်ဆောင်တဲ့သူတွေအတွက် နောက်ခံ Background လေးကို3ဖက် မြင်ရအောင် လုပ်ပေးပြီးတဲ့ Apllication လေးပဲဖြစ်ပါတယ်Water Pro Live Wallpaper V- 1.20 နောက်ဆုံးဘားရှင်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Android O/S : 2.1 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
configure the levels of depth effectShould you have any issues with the wallpaper please write to vinwapgames@gmail.com and we will provide you with support. If the app crashes while setting your own background please write to us saying which device experienced this issue.READ/WRITE EXTERNAL STORAGE permission is being used for choosing own backgrounds.What's in this version : (Updated : May 21, 2014)please use desktop mode on browser when downloading layers from dropbox as mobile version resizes the image to incorrect 1200x1200 resolution added support for PHOTOS app. (No cropping available for this app)bug fix for Android 4.4 KitKat Nexus4sensors freeze
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/23/2014 07:19:00 am